SAWIRO-Ogaysiis Jaaliyada somaliswiss Zürich waxaa dib u bilaabanaya Kulamadiii Ogaanshaha Halka aad ku Nooshahay | somaliswissdiaspora.com
SAWIRO-Ogaysiis Jaaliyada somaliswiss Zürich waxaa dib u bilaabanaya Kulamadiii Ogaanshaha Halka aad ku Nooshahay
Published on Mai 10, 2015 by admin · No Comments
Ogaysiis Jaaliyada somaliswiss Zürich waxaa dib u bilaabanaya Kulamadiii Ogaanshaha Halka aad ku Nooshahay Waxa ka soccfa ee is diiwaangeli Waana Todobaadkii Hal Mar
Hadday warcelintaadu haa tahay, haddaba, ku Soo Dhawoow iyo Imaansho wacan kulan looga hadlayo arrimahaa iyo kuwo kale. Xilliga Kulanka uu dhacayo waa Maalmaha hoos ku qoran waana afar goor: Waxaa uu ka dhacaya kulankeeyna 23. Mai ilaa 13 Jun 2015 Saacada 15.00 .Galabnimo Gartenhofstr. 7, 8004 Zürich Waa Agagarka Bahnhof Weidikon waxad ka soo raaceeysa Bahnhofka Tram 14, Marka u socdo Trimli uga deg Haltestele Werd, ka dibna xooga horey u soco dhinaca Tramka u socdo kadibna Midig u leexo waad joogta.
Zürich seminaarka 23Mai Mowduucyada laga hadlaayo, waa; Iskoollada, Luuqadda Barashadeeda, iskool ka hor, Caymiska. Ceeyrta, Canshurta lacagaha laga jaro kolka aad shaqeeyso oo lagu fahansiiyo iyo in lagaga jawaabo weeydiimahaga iyo weliba arrimaha dhalashada Wadankan.
is dhexgelka barashada Bulshada, Cunsuriyad la dhaqanka Deriskaga, xilliga Fasaxaga, Degmada, Gobalka ama dalka waxa Ka jira Demokratie, Taariiqda, Sharciyada Waxaan Ka wada hadleeynaa Nolosha waddankaan. Dhaqankooda waa sideee kala duwanaanshaha labada dhaqan? Waxaan ka barankarnaa oo nala gudbon oo fiican. Maxa layskaga midyahay? Waxaana laguu sahlayaa ogaanshaha Nolosha halkaan, waxaad soo gudbin kartaa aragtidada iyo qibraddaada,waxaan sameeyndoona Dalxiis kooban. Seminaarkaan waxa uu kuu Sahlaya adiga iyo qooyskaaga in aad nolosha wadankaan waxbadan ka ogaataad. Haddii aad ka qeebqadato dhamaan saacadaha.Seminaarkan waxaa lagu siinayaa shahaado Markaad 4 Goor Ama 5 dhameeysato dhamaan Mowduucyada Wax barasho.
ka qeebqaadashada Seminaarkan.
waana afar goor: Waxaa uu ka dhacaya kulankeeyna 23. Mai ilaa 13 Jun 2015 Saacada 15.00 .Galabnimo Gartenhofstr. 7, 8004 Zürich Waa Agagarka Bahnhof Weidikon waxad ka soo raaceeysa Bahnhofka Tram 14, Marka u socdo Trimli uga deg Haltestele Werd, ka dibna xooga horey u soco dhinaca Tramka u socdo kadibna Midig u leexo waad joogta.
Horjoogaha Tebinta Warbixinta
Mustaf Bashir Gobdon,
079 798 38 05, gobdon@bluewin.ch